Otu esi emepụta listi ọkpụkpọ na egwu ị gere ntị kacha na Spotify | Akụkọ akụrụngwa
Jose Rubio | | General, Nkuzi
Ruo taa, mmadụ ole na ole amaghị Spotify. Ejiri ọtụtụ nde mmadụ n'ụwa mee ihe, ọ na-enye anyị ohere ịnwe egwu niile anyị chọrọ na mkpịsị aka anyị. Ọ bụ ezie na otu n’ime ike Spotify jiri tụnyere ọrụ egwu egwu na-asọ asọmpi nke asọmpi ahụ na mmadụ ole na ole maara bụ na ọ na-enye ohere ọrụ ndị ọzọ. jiri API gị ma mepụta ngwaọrụ nke, dịka ọ dị n'ihe banyere aka, dị bara ezigbo uru.
Taa na Actualidad Gadget anyị ga-ekwu maka otu n'ime ha: Megharịa. Ever nwetụla mgbe ị na-achọ ịmata ihe kedu egwu ma ọ bụ ndị na-ese ihe ị na-ege ntị na Spotify? Ọfọn, na weebụsaịtị a anyị ga-enweta ozi a n'ime iru nke pịa, yana, ọ ga-enye anyị ohere ike listi ọkpụkpọ n'aka ha.Ma echegbula, ọ bụghị ihe siri ike ma ọlị. Naanị anyị ga-enweta ebe nrụọrụ weebụ Replayify ma banye na akaụntụ Spotify anyị. Site na weebụ ha na-emesi nke ahụ ike anaghị echekwa data ahụs n'ụzọ ọ bụla. Ozugbo oge nke akaụntụ anyị malitere, anyị ga-enwe ya a ndepụta na 50 nka na anyị na-egwuri kasị ugboro na Spotify. N'ezie, anyị nwere ike ịhọrọ oge nke ndepụta ahụ na-egosi anyị, ohere ya bụ ọnwa ikpeazụ, ọnwa isii gara aga, ma ọ bụ site na ụbọchị mbụ.
Ma ọ ga-enye anyị ohere mepụta ndetuta ọkpụkpọ nke anyị nke ndị na-ege ntị kacha ege ntị, dị ka nhọrọ oge anyị kwuru, ma dị mfe dị ka ịpị bọtịnụ dị na ala maka nzube a. E guzobere ndepụta ahụ site na ịtụkwasị enweghị usoro na nke onye ọ bụla na-ese ihe egwu ise a kacha ege ntị.
N'ezie, na ndepụta nke Replayify anyị nwere ike ime otu ihe ahụ na ndepụta ọ bụla anyị kere, dị ka ịkọrọ ya ndị enyi ma ọ bụ ndị ikwu. Na ịgbanye curl, ihe anyị nwere ike ime dabere na ndị kachasị ege ntị na ndị na-ese ihe na-ekwe omume 50 egwu egwu egwu. A ga-emepụta ndepụta ọkpụkpọ ahụ dabere na oge akọwapụtara na kpamkpam na-akpaghị aka na enweghị usoro.
Nhazi ya, ọrụ ya na ọsọ ya ga-enwe mmasị, n'ihi na na mgbakwunye na inwe ike ịmepụta ndepụta dịka anyị si eji ya eme ihe, ọ na-enye anyị ohere ịmata kpọmkwem egwu anyị na-ege ntị kachasị site na Spotify. N'ezie, ndepụta ndị a nwere ike dezie otu ugboro na akaụntụ anyị, mana mgbe ahụ ha ga-efunahụ amara ha niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Otu esi emepụta listi ọkpụkpọ na egwu ị gere ntị kacha na Spotify
Ihe nkiri kacha mma na usoro iji lelee Netflix na HBO n'oge okpomọkụ a
Ha na-achọpụta omume dị iche na satịlaịtị Russia nke na-agba ọsọ